I-Gemini Horoscope: I-Gemini Zodiac Sign kunye neMihla yokuNxibelelana kwayo, iimpawu kunye neempawu - Gemini
I-Gemini Zodiac Sign Horoscope
Ulwazi ngeGemini ngeenkwenkwezi x
Umbala: Mthubi oluhlaza
Ukuhambelana okukhulu ne: Libra, Aquarius/span>
Iqabane eligqwesileyo loMtshato kunye neNtsebenziswano: Sagittarius
Amanani ethamsanqa: 3, 8, 12, 23
Isikhundla sokuzalwa: NgoMeyi 21-Juni 20
Amandla: Ububele, ukuthanda ukwazi, ukuguquguquka, ukukwazi ukufunda ngokukhawuleza kunye nokutshintsha iingcamango
U-Aries uyathanda: umculo, iincwadi, iincoko phantse nabani na, uhambo olufutshane
U-Aries akathandi: Ukuba wedwa, ukuvalelwa, ukuphindaphinda kunye nesiqhelo
Ukucacisa kunye nokucinga ngokukhawuleza, iGeminis imele amacala amabini ahlukeneyo obuntu kwaye awuqinisekanga ukuba yeyiphi oyibonayo. I-Gemini iyakwazi ukuhlalisana, ukuthetha, kwaye ilungele ukuzonwabisa, ngelixa kwelinye icala, inokuba yinto enzulu kakhulu, icinge, ingazinzi, kwaye ingenzi isigqibo. Njengomqondiso womoya, iGemini ixhalabele yonke imiba yengqondo. Olu phawu lwezodiac lulawulwa yiMercury, iplanethi yonxibelelwano, ukubhala kunye nokufundisa.
Bathabatheka phantse yiyo yonke into esehlabathini kwaye banombono wokuba akuyi kubanela ubomi babo bonke ukubona yonke into abafuna ukuyibona. Oku kubenza babe ngamagcisa abalaseleyo, ababhali, neentatheli. Isibonakaliso seGemini sithetha ukuba abantu abazalwa phantsi kwesi sibonakaliso bavakalelwa kukuba esinye isiqingatha sabo silahlekile, yingakho behlala befuna abacebisi abatsha, abahlobo kunye noogxa. I-Geminis iyaguquguquka, ifuna ukwazi, ithanda ulonwabo kwaye ifuna ukuba namava kangangoko kunokwenzeka, ngoko ke inkampani yabo ayifuni.
Gemini Uthando kunye nesondo
Ulonwabo kwaye uhlala ulindele umngeni wobukrelekrele, uGemini sisithandwa esiqatha. Unxibelelwano lubaluleke kakhulu kwiGemini, njengoko kudibene nomzimba, kwaye xa le mibini idibene, akukho nto ingumqobo. Ukubuza kwaye uhlala ekulungele ukudlala ngothando, iGeminis iya kuchitha ixesha elininzi kunye nabathandi abahlukeneyo ngaphambi kokufumana okulungileyo, lowo unokwanelisa ingqondo namandla abo. I-Geminis idinga ukuziva imincili, ukuhlukahluka, kunye nokuthanda ukwanelisa ngokupheleleyo. Xa iGeminis ifumana iqabane labo eligqibeleleyo, baya kuthembeka kwaye bathembeke.
Gemini Abahlobo kunye noSapho
Abo bazalwa phantsi komqondiso weGemini bangabantu bentlalontle kakhulu kwaye bathanda ukuchitha ixesha kunye nabahlobo babo kunye nosapho. IiGemini zinabahlobo abaninzi yaye ziyakuthanda ukuncokola nokuqondwa, ngoko olunye lweempawu ezizijongayo kwabanye lunxibelelwano oluhle. Ukuba akukho ndlela yokunxibelelana ecacileyo, iGemini iya kulahlekelwa ngumdla kwincoko. Usapho lubalulekile kubo, ngakumbi abo malungu entsapho afana nabo. Ubuhlobo kunye nabantakwenu yinto eqhelekileyo kwiGeminis, kwaye ixesha abalichitha kunye lixabisekile. Uxanduva lwentsapho luhlala lucelomngeni kwiGeminis, kodwa bahlala beyazi indlela yokulawula ukuyizalisekisa.
Umsebenzi weGemini kunye nemali
Umsebenzi ongcono weGemini ngulowo uvuselela ingqondo. IiGemini zingabantu abanobuqili, abanobuqili kwaye bahlala bekrelekrele kakhulu, yiyo loo nto umsebenzi wabo kufuneka ube namandla kwaye ube ngumngeni. Nangona kunjalo, abayithandi imisebenzi ephindaphindwayo.
Eyona misebenzi ilungileyo yolu phawu lwezodiac yileyo katitshala, umqambi, intatheli, umbhali, isithethi kunye negqwetha. Nawuphi na umsebenzi obonelela ngamathuba amaninzi onxibelelwano kwaye uwagcine exakekile ngokwaneleyo mkhulu. I-Gemini inokuba ngumrhwebi obalaseleyo. Ukudala imibono emitsha kunye nokusombulula iingxaki ziindawo apho iGeminis inokukhanya nabo bonke ubukhazikhazi bayo.
Ukwenza isigqibo phakathi kokusebenziseka kunye nolonwabo kunokuba lukhetho olunzima kwiGemini.Nangona beyijonga imali njengobubi obuyimfuneko, uninzi lweeGeminis aziyi kuchitha ixesha elininzi zicinga ukuba zingayifumana phi.
Indoda yeGemini inomdla kwaye igcwele ubomi, ngoko akusayi kuze kubekho ixesha elibi kunye naye.
Unomdla kwaye unoburharha obuhle, ke unokuba ngumdlalo wakho ogqibeleleyo ukuba ungumntu oguqukayo kwaye odlamkileyo, amadoda eGemini ancokola kwaye anomdla ngendalo, ke iintlanganiso zikawonkewonke lukhetho olubi ukuba ufuna ukumhenda, kuba zidla ngokuba ngumbindi wengqwalasela.
Enye yeempawu ezimbi kakhulu zeGemini kukuba banokungabi nzulu kwaye bangazithembi ekwenzeni kwabo izigqibo. Ubuntu beGemini buphawulwa ngobumbini. Amadoda angamaGemini awahambelani kodwa anobuqili, okwenza ukuba abe nomdla ngakumbi kubasetyhini Indoda ezelwe phantsi komqondiso weGemini ayinakwenzeka ukubamba. Ukuba ufuna ukumrhwebesha, ufanele wazi ukuba ufuna ukuvuselela ingqondo nokwahluka. Yiba mnandi, uphakamise, uhleke amahlaya akhe, kwaye ungoyiki ukuzama into entsha ebhedini.
Ukwahlukahlukana ngundoqo xa kufikwa ukuhenda indoda Gemini. Nangona kunjalo, gcina zonke iimvakalelo ngaphandle kwayo nayiphi na incoko kwaye ugcine izinto zilula.
Ukwabelana ngesondo neGemini indoda inokuba ngamava amnandi, kodwa nokuba awuzimiselanga ukwenza umfuniselo, mhlawumbi uya kuba nesithukuthezi.
Ukuba ufuna ukutsala umfazi weGemini, kuya kufuneka ukwazi ukumelana nendalo yakhe emibini.
Abafazi beGemini banokuba nomdla kwaye banobubele umzuzu omnye kwaye badakumbile kwaye bakude ngokulandelayo. Oku kungumphumo wotyekelo lwabo lwemvelo lokulumka eluthandweni.
Umfazi ozelwe phantsi komqondiso we-zodiac weGemini unokuba nomdla kakhulu, unobuqili, unengqondo kunye nolwimi olumnandi. Olunye lweempawu ezintle zikaGemini yingqondo evulekileyo.
Nangona umfazi weGemini edla ngokukhawuleza ukuba neentlobano zesini, ukuba nobudlelwane obunzulu kunye nokuzimisela kunye naye yinto eya kufuna ixesha kunye nomonde. Nangona kunjalo, xa ufumene umntu onokwanelisa iminqweno yakho yesondo kunye nengqondo, uya kuba nguye oya kucebisa ukuba uyeke ukuthandana kwaye uqale ubudlelwane obunzulu.
Umfazi ozelwe phantsi kophawu lwenkwenkwezi yeGemini unokuba liqabane lakho elifanelekileyo, ukuba nje unokuqhubeka naye ekufuneni kwakhe rhoqo imingeni emitsha yesini kunye nengqondo. Ngakolunye uhlangothi, isondo kunye nomfazi weGemini ayisokuze ibe yinto ekruqulayo.
Umfazi weGemini ukrelekrele kakhulu, ngoko ke ukuba unokumfundisa into angayaziyo, uya kumchukumisa kwaye wandise amathuba akho okumzuza. Ngokubanzi, ukuthandana umfazi Gemini kunokuba ngamava umdla kakhulu kwaye umngeni.
Iimpawu ezihambelanayo ekufuneka ziqwalaselwe ngu-Aries: Aries , Leo , Iponti , Aquarium
Ngena Leo Itaurus Khetha Uphawu Virgo